Ukuthengisa ngaphakathi kwiShishini elincinci | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 20, 2013 NgoLwesibini, Matshi 19, 2013 Douglas Karr
Itekhnoloji iyaqhubeka nokubonelela ngamathuba amangalisayo kwishishini elincinci. Njengoko amandla ekhompyuter kunye namaqonga eqhubeka ukuqhubela phambili, iindleko ziyaqhubeka nokuhla ebhodini. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, izixhobo zokukhangela kunye neqonga loluntu zazingamawaka eedola ngenyanga kwaye zazifumaneka kuphela kwiinkampani ezinokuthi zikwazi ukutyala imali. Ngomso ndiza kube ndithetha neqela labaqeqeshi bamashishini amancinci malunga nezixhobo zokubanceda kwaye UpCity sesinye sezixhobo eziphezulu kuluhlu lwam.
UpCity ixhaswe liqonga labo leNdlela ™. I-Pathway ™ ivavanya ukubonakala kweshishini lakho kwi-intanethi, kwaye inikezela ngenkqubo elula, yenyathelo nenyathelo yokunyusa ukubonakala kwakho kwi-intanethi ngokusebenza kweinjini yokukhangela, ulawulo lwegama, ukubhloga, kunye nokwenza uluhlu lodweliso lwasekhaya.
UpCity Isoftware eyomeleleyo ye-SEO kunye neqonga lezemfundo elikunika ingxelo kunye nokuqonda kunye nesicwangciso senyathelo nenyathelo lokukukhokelela kwimpumelelo yentengiso ye-intanethi.
UkuSebenza kweWebhusayithi Lungiselela iwebhusayithi yakho kubathengi kuqala kunye neinjini zokukhangela okwesibini.
Ukulungiswa kwasekhaya -Qiniseka ukuba unoluhlu olucocekileyo noluchanekileyo kwiziza zendawo ezinje ngeGoogle + yaseKhaya, iYelp nabanye abaninzi.
UkuLungiswa kweeNtlalo zoLuntu -Yila ubukho kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni ezinje nge-Twitter kunye ne-LinkedIn kwaye ufunde indlela yokuzisebenzisa ukwenza izikhokelo.
Ulawulo lweSifa -Qonda ukuba bathini abantu malunga neshishini lakho kunye nokhuphiswano lwakho kwiindawo zokuphononongwa nakumajelo asekuhlaleni kwaye uphendule ngokufanelekileyo.
kubloga -Funda ukuba ukubhloga kunokuba nefuthe elibonakalayo ekubonakaleni kwi-Intanethi kunye nezinye izinto ezilula zokubhloga.
tags: kublogaulungiselelo lwasekhayaukukhangela kwendawoulungiselelo lokhangelo lwasekhayayendawo seoulawulo lwegamaImidiya yokuncokolaukwenziwa kwemidiya yoluntuukuqinisekiswa kwewebhusayithi
Isibheno esiSelfowni-Ukuphonononga iMeko yeNdawo yokuShukumiseka